Duulimaadyadii garoomada magaalada Muqdisho oo si KMG ah loo joojiyay (AKHRISO) – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Duulimaadyadii garoomada magaalada Muqdisho oo si KMG ah loo joojiyay (AKHRISO)
Waxaa maalinta Arbacada si KMG ah loo joojiyay dhamaan duulimaadyadii imaan jiray ama ka bixi jiray garoomada diyaaradaha ee ku yaala magaalada Muqdisho, iyadoona amarkaan uu imaanayo xilli la qorsheeynayo inay magaalada ka dhacdo doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya.
Wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada ee xukuumadda federaaalka Soomaaliya Cali Axmed Jaamac Jangeli oo maanta la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in maalinta Arbacada ay dowladda si KMG ah u joojisay dhamaan duulimaadyadii imaan jiray ama ka tagi jiray magaalada Muqdisho.
Shirkadaha diyaaradaha ee ka howlgala magaalada Muqdisho ayaa lagu wargeliyay in maalinta Arbacada ah aanay wax duulimaad ah ka sameyn karin magaalada, xilligaasi oo ay dhici doonto doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya.
Amarkaan cusub ayaa kusoo beegmaya xilli maamulka gobolka Banaadir uu magaalada Muqdisho kusoo rogay bandow labo maalmood soconaya.
Bandowgaasi ayaa bilawday maanta oo Talaado ah, wuxuuna socon doonnaa illaa ay ka dhamaaneyso doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya, taas oo dhici doonto maalinta Arbacada ah ee nagu soo aadan.
Dhinaca kale, wadooyinka waaweyn ee magaalada Muqdisho ayaa maanta lagu daadiyay dhagxaan aad u waaweyn iyo carro badan, kuwaas oo looga hortagaayo qaraxyo iyo weeraro ay Al-shabaab ka geystaan xarumaha dowladda.
Si kastaba ha ahaatee, maalinta Arbacada ayaa la filayaa in magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya ay ka dhacdo doorashada xilka madaxweynaha Soomaaliya, waxaana doorashadaasi ku tartami doonna illa 23 musharax, iyadoona ay coddeyn doonaan illaa 329 xildhibaan oo ka wada tirsan labada Aqal ee baarlamaanka Soomaaliya.